Bit By Bit - agba nwere - 4.5.1.2 Mee gị onwe gị na nnwale
Na mgbakwunye na machie nwere on top of ẹdude gburugburu, i nwere ike iru ulo gị onwe gị na nnwale. Ndị isi uru nke a bụ akara; ọ bụrụ na ị na-ewu nnwale, ị nwere ike ịmepụta gburugburu ebe obibi na ọgwụgwọ ị chọrọ. Ndị a bespoke ibuo gburugburu nwere ike ịmepụta ohere iji nwalee nchepụta echiche na-agaghị ekwe nwalee na-adịkarị na-ewere ọnọdụ gburugburu. Isi ndọghachi azụ nke ewu gị onwe gị na nnwale bụ na o nwere ike ịbụ oké ọnụ nakwa na gburugburu ebe obibi na ị na-enwe ike ike ghara ịbụ ndị nsiridi nke a ndammana na-ewere ọnọdụ usoro. Researchers-ewu ha nnwale aghaghị inwe a atụmatụ maka ew sonyere. Mgbe na-arụ ọrụ ẹdude usoro, na-eme nnyocha na-nnoo n'iwetara ndị nwere ka ha sonyere. Ma, mgbe na-eme nnyocha na-ewu ha nnwale, ha mkpa iji mee ka sonyere na ya. Ọ dabara nke ọma, ihe ndị dị ka Amazon Mechanical Turk (MTurk) nwere ike inye na-eme nnyocha a adaba n'ụzọ iji wetara sonyere na ha nwere.
Otu ihe atụ nke gosiri na ido nke bespoke gburugburu maka anwale nkịtị chepụtara bụ digital lab nnwale site Gregory Huber, Seth Hill, na Gabriel Lenz (2012) . The nnwale explores a kwere omume bara uru mmachi ka ịrụ ọrụ nke onye kwuo uche, oha. Tupu mgbe ndị na-abụghị ibuo ọmụmụ nke n'ezie ntuli aka na-egosi na Ntuli Aka na-enweghị ike n'ụzọ ziri ezi-amata arụmọrụ nke incumbent ndoro-ndoro ochichi. Karịsịa, Ntuli-egosi ata ahụhụ site na atọ biases: 1) lekwasịrị anya na-adịbeghị anya kama cumulative arụmọrụ; 2) manipulatable site ihapu otutu okwu, Framing, na ahịa; na 3)-enwe mmetụta ihe ọzọ na-agbasaghị incumbent arụmọrụ, dị ka ịga nke ọma nke obodo òtù egwuregwu na ihu igwe. Na ndị a na mbụ ọmụmụ, Otú ọ dị, ọ bụ ike ịdị na-anọrọ ọ bụla nke ndị a ihe n'ebe ndị niile ọzọ stof na-eme na ozugbo, imetosi ntuli aka. Ya mere, Huber na ndị ọrụ ibe kere a ukwuu mfe ịtụ vootu gburugburu ebe obibi iji na-anọrọ, wee experimentally-amụ, onye ọ bụla nke atọ ndị a ga-ekwe omume biases.
Ka m na-akọwa na ibuo set-elu n'okpuru ya na-aga uda ukwu aka wuru, ma cheta na nsiridi bụ ihe mgbaru ọsọ na lab-ịke nwere. Kama nke ahụ, ihe mgbaru ọsọ bụ n'ụzọ doro anya na-anọrọ usoro na ị na-achọ ịgụ akwụkwọ, na a uko kewapụrụ iche bụ mgbe ụfọdụ agaghị ekwe omume na ọmụmụ ihe nsiridi (Falk and Heckman 2009) . Ọzọkwa, a kpọmkwem, ka ndị nnyocha ahụ rụrụ ụka na ọ bụrụ na Ntuli Aka ike n'ụzọ dị irè nyochaa arụmọrụ na nke a ukwuu simplified ọnọdụ, mgbe ahụ, ha na-agaghị na-enwe ike ime ya na ndị ọzọ kwesịrị, ihe mgbagwoju ọnọdụ.
Huber na ndị ọrụ ibe ji Amazon Mechanical Turk (MTurk) to n'oru sonyere. Ozugbo a soò nyere ụbụrụ bụ na gafere a obere ule, a gwara ya na ọ na-ekere òkè a 32 gburugburu egwuregwu irite tokens na ike-converted n'ime ezigbo ego. Ná mmalite nke egwuregwu, ọ bụla na-a gwara ya na ọ na e kenyere onye "allocator" nke ga-enye ya free tokens ọ bụla gburugburu nakwa na ụfọdụ allocators ndị emesapụ aka ka ndị ọzọ. Ọzọkwa, ọ bụla na-na-gwara ya na ọ ga nwere ohere ma na-enye allocator ma ọ bụ na-kenyere a ọhụrụ otu mgbe 16 agba nke egwuregwu. Nyere ihe ị maara banyere Huber na ndị ọrụ ibe 'nnyocha mgbaru ọsọ, ị pụrụ ịhụ na allocator na-anọchi anya a ọchịchị na nke a oke-anọchi anya ihe ntuli aka, ma sonyere ha amaghị izugbe mgbaru ọsọ nke nnyocha. Na ngụkọta, Huber na ndị ọrụ ibe recruited banyere 4,000 sonyere ndị e ugwo ihe $ 1.25 n'ihi na a ọrụ na ada banyere 8 nkeji.
Cheta na otu n'ime Nchoputa si na mbụ nnyocha bụ na Ntuli ụgwọ ọrụ na-ata incumbents maka esi na-n'ụzọ doro anya karịa otú ike ha, dị ka ịga nke ọma nke obodo sports ìgwè na ihu igwe. Ka amata ma sonyere ịtụ vootu mkpebi nwere ike isi metụta kpere random ihe ndị dị na ha ọnọdụ, Huber na ndị ọrụ ibe kwukwara lọtrị ka ha ibuo usoro. Na ma 8th gburugburu ma ọ bụ nke 16 gburugburu (ie, nri n'ihu ohere iji dochie allocator) sonyere e enweghị usoro enịm ke lọtrị ebe ụfọdụ merie 5000 ihe, ụfọdụ merie 0 ihe, na ụfọdụ aba 5000 ihe. Nke a lọtrị ahụ a chọrọ ka iṅomi ha mma ma ọ bụ akụkọ ọjọọ nke na-onwe ha nke na arụmọrụ nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ bụ ezie na ndị keere òkè e n'ụzọ doro anya na gwara na lọtrị bụ nweghị mmekọ na arụmọrụ nke ha allocator, pụta nke lọtrị ka impacted sonyere 'mkpebi. Sonyere na uru site lọtrị yikarịrị ka ha na-ha allocator, nke a pụrụ isi kwuo bụ ike mgbe lọtrị mere na gburugburu 16-nri n'ihu nnọchi mkpebi karịa mgbe ọ mere na gburugburu 8 (ọgụgụ 4.14). Ndị a results, tinyere ihe ndị ọtụtụ ndị ọzọ nwere na akwụkwọ, duru Huber na ndị ọrụ ibe ya ikwubi na ọbụna a simplified ọnọdụ, Ntuli nwere ike ime mkpebi ndị amamihe, N'ihi na impacted n'ọdịnihu nnyocha banyere Voter mkpebi (Healy and Malhotra 2013) . The nnwale nke Huber na ibe-egosi na MTurk nwere ike iji na n'oru sonyere maka ụlọ nyocha-ụdị nwere na kpomkwem nwalee ihe aha chepụtara. Ọ na-egosikwa uru nke ewu gị onwe gị na ibuo gburugburu ebe obibi: ọ bụ ike were ya otú a otu ihe ahụ usoro a gaara dịpụrụ adịpụ otú cleanly na ihe ọ bụla ọzọ ọnọdụ.
Ọgụgụ 4.14: Results si Huber, Hill, and Lenz (2012) . Sonyere na uru site lọtrị ndị ọzọ yiri ka na-ejigide ha allocator, nke a pụrụ isi kwuo bụ ike mgbe lọtrị mere na gburugburu 16-nri n'ihu nnọchi mkpebi karịa mgbe ọ mere na gburugburu 8.
Na mgbakwunye na-ewu ụlọ nyocha-dị ka nwere, na-eme nnyocha nwere ike iru ulo nwere na ndị ọzọ ubi-dị ka. Dị ka ihe atụ, Centola (2010) wuru a digital ubi nnwale na-amụ mmetụta nke mmadụ netwọk Ọdịdị on mgbasa nke omume. Ya research ajụjụ chọrọ ya na-edebe otu omume na-agbasa na ọnụ ọgụgụ mmadụ bi na nwere dị iche iche na-elekọta mmadụ na netwọk owuwu ma ndị na uzọ ọzọ indistinguishable. Nanị ụzọ ime nke a bụ na a bespoke, omenala-wuru nnwale. Na nke a, Centola wuru a web dabeere na ahụ ike na obodo.
Centola recruited banyere 1,500 sonyere na mgbasa ozi na ahụ ike weebụsaịtị. Mgbe sonyere rutere online obodo-nke a na-akpọ ike ndụ Network-ha bụrụhaala na ụbụrụ bụ na mgbe ahụ, e zigara "ahụ ike buddies." N'ihi ụzọ Centola kenyere ndị a ike buddies ọ bụ ike ikpa efe ọnụ dị iche iche na-elekọta mmadụ na netwọk owuwu dị iche iche iche iche. Ụfọdụ ìgwè e wuru nwere random netwọk (ebe onye ọ bụla bụ dokwara yiri ka a ga-ejikọrọ) na ndị ọzọ dị iche iche e wuru nwere clustered netwọk (ebe na njikọ ndị ọzọ na mpaghara oké). Mgbe ahụ, Centola ẹkenam a ọhụrụ omume n'ime onye ọ bụla na netwọk, ohere ịdebanye aha maka a ọhụrụ website na ndị ọzọ ahụ ike ọmụma. Mgbe ọ bụla onye ọ bụla aka maka ọhụrụ a website, niile nke ahụ ike ya buddies natara ozi na-ama ọkwa nke a bụ omume. Centola chọpụtara na nke a bụ omume-bịanyere aka n'akwụkwọ nkwado-elu nke ọhụrụ website-agbasa n'ihu ma na ngwa ngwa na clustered netwọk karịa random netwọk, a Inweta ndị megidere ụfọdụ ẹdude chepụtara.
N'ozuzu,-ewu gị onwe gị na nnwale na-enye gị ọtụtụ ihe ndị ọzọ akara; ya enyere gị aka rụọ ihe kasị mma ga na gburugburu ebe obibi na-anọrọ ihe ị chọrọ ịmụ. O siri ike iche n'echiche otú ma nke a nwere a gaara rụrụ na ihe ugbua ẹdude gburugburu ebe obibi. Ọzọkwa,-ewu gị onwe gị na usoro mbelata usoro ziri ezi nchegbu gburugburu na na na ẹdude usoro. Mgbe ị na-ewu gị onwe gị na nnwale Otú ọ dị, ị na-agba n'ime ọtụtụ nsogbu ndị na-okosobode ke ụlọ nyocha nwere: ew sonyere ma banyere nsiridi. A ikpeazụ downside bụ na-ewu gị onwe gị na nnwale nwere ike ịdị ọnụ na-ewe oge, ọ bụ ezie na dị ka ihe atụ ndị a na-egosi, ndị nwere ike mbio dịtụ mfe gburugburu (dị ka ihe ọmụmụ banyere ịtụ vootu site Huber, Hill, and Lenz (2012) ) ka dịtụ mgbagwoju gburugburu (dị ka na-amụ ihe nke netwọk na contagion site Centola (2010) ).